Umgangatho wePCBing Fabrication - iPandawill Technology Co., Ltd.
Umgangatho yeyona nto siyithandayo. Ukubonelela ngemveliso esemgangathweni esemgangathweni kunye nokwanelisa ngokupheleleyo izicelo zabathengi kumiliselwe ngokuqinileyo kwingqondo yakhe wonke umntu ePandawill. Oku kuqala kwakamsinya nje ukuba idatha yakho ifike kwaye ihlale emva kwenkonzo yentengiso. Ulawulo lwethu lomgangatho ikakhulu lubandakanya iinxalenye ezintathu:
Le nkqubo kukulawula ababoneleli, ukuqinisekisa izinto ezingenayo, kunye nokusombulula iingxaki zomgangatho ngaphambi kwemveliso.
Ababoneleli bethu abaphambili kubandakanya:
Inkqutyana: Shengyi, Nanya, Kingboard, ITEQ, Rogers, Arlon, Dupont, Isola, Taconic, Panasonic
Inki: UNanya, uTaiyo.
Inkqubo yoLawulo loMgangatho kunye noVavanyo
Ukuqala ngolungiselelo lokuvelisa (MI), ngenkqubo yokutshekisha, ukuya kuvavanyo lokugqibela, ulawulo lomgangatho webhodi yesekethe egqityiweyo ngumxholo ophindaphindiweyo kuyo yonke inkqubo yemveliso.
Ngelixa ukuthembeka kunye nokuchaneka kwamanyathelo okulungisa amachiza kunye noomatshini kuqinisekiswa ngohlalutyo olubhaliweyo kuyo yonke inkqubo kunye namanyathelo olondolozo, ibhodi nganye yesekethe ixhomekeke kuvavanyo oluphakathi nolokugqibela. Oku kuqinisekisa ukuba imithombo enokubakho yeempazamo inokuchongwa ngokukhawuleza kwaye isonjululwe ngokusisigxina. Iibhodi zeesekethe ziya kutshekishwa kuthelekiswa neemfuno eziphezulu ze-IPC-A-6012 Class 2 eyamkelwe kwilizwe liphela.
Ukujonga kunye novavanyo kubandakanya:
> Jonga idatha yabathengi (i-DRC-Jonga uMgaqo woYilo)
> Uvavanyo lwe-elektroniki: iivoluyum ezincinci zijongwa ngephenyo ephaphazelayo kunye noluhlu olukhulu kusetyenziswa uvavanyo lwe-E-Test.
> Uvavanyo lweOptical Optical: iqinisekisa umfanekiso ogqityiweyo wokulandela umkhondo wokuphambuka kwiGerber kwaye ufumane iimpazamo ezingenakufunyanwa luvavanyo lwe-E.
> I-X-Ray: chonga kwaye ulungelelanise ukufuduswa kwomaleko kunye nemingxunya yokomba kwinkqubo yokucinezela.
> Amacandelo okusika kuhlalutyo
> Uvavanyo lokothuka olushushu
> Uphando lweMicroscopic
> Uvavanyo lokugqibela lombane
> Uvavanyo lokugqibela lokujonga lweebhodi zesekethe
> Ukupakisha okuphezulu kunye nokutywina kwibhokisi yokuhambisa.